Qiimaha barnaamijka - Geofumadas
Oktoobar, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Qiimaha ayaa ku jira sanduuqa, kharashka naloo jeediyey, isticmaalka isticmaalka waxaan ku siinaynaa, qiimaha aan ku qanacsanahay.
Tani waa arrin aad u xasaasi ah, iyada oo ku xiran hadba aragtida qofka ku yiraahda, yaa damacsan oo bixiya qarashkooda; guud ahaan waxaanu ku biiraynaa waxa ku habboon softwareka leh calaamadda soo socota ee calaamadda doolarka, inta badan aan la qabsan karin suuqyada yaryar ama sababtoo ah waxaan isbarbardhigeynaa kuwa kale maahan macnaha guud.
Anigu waxaan aaminsanahay in liisamada furan ee furan ay yihiin isbeddel aan laga noqosho lahayn, iyo in dhawr sano gudahood (haddaanay hore u dhicin) ay qayb fiican ka qaadan doonaan suuqa inta badan adduunyada tiknoolajiyada, hab waara (taas oo aan way dhacaysaa). Laakiin in barnaamijku uu lacag la’aan yahay, macnaheedu ma aha in gaajada aadanaha ay dhammaan doonto. Hirgelinta, hal-abuurnimada, tababarka iyo cusbooneysiintu waxay leeyihiin qiime ay tahay inuu qof bixiyo; iyo dhamaadka software-ka ganacsiga waa inuu jiraa si loo sameeyo isbeddellada la iibsan karo.
Markii aan saaka dhageysanayay codka Greg Bentley, imisa malaayiin doolar ayaa lagu uruuriyay 25 sanadood barnaamijkiisa Microstation & family, waxaan uheli karaa fikirkeyga koowaad xarig bahalnimo oo aan ku habooneyn meeshan. Laakiin markii aan ogaano in tani ay tahay qiimaha kuwa wax cusub soo bandhigaya, dhagaxa labaad ee kuwa kale iyo kuwa badan oo la socda, waxaan aakhirka ogaaneynaa inay abaalmarin u tahay dadaalkooda, taas oo aysan sameyn 23-ka jaamacadood ee ay wada shaqeeyaan (oo aan ku jiro, ama aabbahay).
Waxay wali u egtahay inaan u maleyneyno in amaahdan la qaatay maxaa yeelay qaar badan ayaa cunay oo dhameystiray qalabkooda. Run, laakiin kuwa kale waxay kaloo kasbadeen dakhligooda gaarka ah, taas oo sharciga nolosha ay ku gaari lahaayeen barnaamij kasta oo kale oo software ah, heer aad u sarreeya ama ka yar laakiin runtii waa dadaal isku mid ah.
Sidaa darteed, haddii aan ku qanacsannahay qiimaha software, xaddidnaanta ka hor dalabkayaga, tayada adeegga ama xitaa siyaasadaha waalan; waa in aan sidoo kale ogaannaa in aan cuni karno inagoo cunaya raashin ahaan; ha ahaato isticmaalka ama tartanka.
AutoCAD gubtay badan oo xasuusta, Bentley waa unintuitive, gvSIG dhaqaaqin aad u gaabis ah, ESRI waa mid aad u qaali ah, Windows waa dhacsan, in yar oo kala cayncayn ah loo yaqaan, Google Earth aad u caddayn ...
Sawir isagoo aan ku guuleystay abaalmarino badan ee taariikhda, samaynta troll waa ugu fudud (oo mararka qaarkood delicious), laakiin mar walba (ku dhawaad) waa suurto gal in la helo aragti ah "guul" ee silsiladda qiimaha ku daray oo ka mid ah Xiriirrada:
-Guushahaydu waa natiijada farsamayaqaanadayda, waxaan uga faa'iidaystaa illaa ay dhintaan laakiin sidoo kale dakhligooda waxay kordhiyeen resumeygoodii waxayna bixiyeen biilashoodii. Ugu dambayntii waxaan ka bartay inbadan oo ka mid ah awoodahooda gabaygayga, qaar baa iga sii dheeraan doona, maxaa yeelay waxay leeyihiin karti aad u badan.
-Waxay ka faa'iideysan doonaan diiwaankaaga, in kasta oo aan ahay kan hadda sacabku la imaanayo; Fahmida tan waxay u horseedi kartaa hinaase xirfad ama jahwareer. Laakiin markaa waxay heli doonaan guulahooda, waan ku raaxeysan doonaa waana tan silsilad ay tahay inay ku dhacdo cidda hadda madax ii ah.
Wax la mid ah waxay u dhacaan barnaamijka:
-Bentley lacag badan ayuu ku sameeyaa oo dib ayuu iigu siinayaa abaalmarin ah $ 300, laakiin qalabkiisa ayaan ku darsaday caruurteyda, aqoonta horumarsan, iyo khibrad.
-AutoCAD waxay ku xiran tahay suuqa caalamka, laakiin waa ay mahadsantihiin caansaankeeda waxaan haystaa arday badan oo fasalkayga ah oo raba inay bixiyaan iyo booqashooyin badan oo raadinaya sida loo isticmaalo iyo xitaa sida loo isticmaalo keygenka.
-ESRI ma ixtiraamaan heerarka bulshada qaar ka mid ah, laakiin SIG ku leeyahay wax badan in ay colaad oo taga si aad shir ku San Diego ayaa igu dhalisay niyad waxaa laga yaabaa in ay leeyihiin dadweynaha.
Waxay kuxirantahay waxa aan qabano, waxaa laga yaabaa inaan yeelano fikrado rajo xumo leh oo ku saabsan noocyada ESRI, Bentley, AutoCAD, gvSIG, Google Earth, ama Windows. Laakiin iyagu waa wax soo saar qofkii lahaa hindisaha si uu uga abuuro meel hoose, ama laga soo bilaabo fikradaha aadka u horumarsan illaa imminka. Qeyb wanaagsan oo ka mid ah waxa aan cunno maalin kasta waxaa u sabab ah jiritaankiisa, wadarta joogtayntaada, hal-abuurnimadaada iyo ku faraxsanaanta nolosha ayaa naga wada dhigeysa inaan guuleysanno. Jidku waa qiimaha, guusha waa qiimaha.
Ii sheeg magaca software-ka aad ugu yartahay inaad u naxariisato ... waa hagaag, haduusan isaga aheyn, waxaa laga yaabaa inaadan aqoontaada laheyn oo aad ka tagi laheyd 8-da daqiiqo ee aad aqrinaysay qoraalkaan, maxaa yeelay malaha mareegtaan ma jiri karto Gabagabadii, qiimaha softiweerku wuxuu ku jiri doonaa wax soo saar aan ku kasbano inta aan ku maalgashanay, ha ahaato wax badan, mid yar, mid dhaqaale, mid cabsi badan ama mid xiiso leh.
Bentley Systems blog ESRI Google Earth GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
Post Previous" Hore Waa la Dajiyaa ...
Post Next Arc Ma jiraan waxyaabo aan caadi ahaynNext »
2 Jawaabta "Qiimaha barnaamijka"
Waxaa la siiyay, qaar ka mid ah gardarrada barnaamijyada ganacsiga ee shirkadaha waaweyn ayaa ka faa'iideysanaya jagadooda waxayna dhaawici karaan maaha oo kaliya hay'adaha, laakiin kuwa isticmaala alaabadooda.
Sida software bilaash ah, sharaddu waa inay sii socotaa, in kasta oo waara waa in si dhab ah loo tixgeliyaa. Dhammaanteen waxaan aragnay qalab loo dhisay siyaabo kala duwan, ku dhowaad isla wax qabanaya, afar mid ayaa iskiis isu adkeeya kuwa kalena waxay noqdaan kuwo duugoobay oo dhinta. Taasi maahan inay xun tahay, laakiin waxay u baahan tahay waqti, dadaal ... iyo ugu dambeyn lacag.
Bisaylka ruqsadaha bilaashka ah ee la helay waa mid wanaagsan, inkasta oo ay jirto wali ay shaqeyneyso si ay u xoojiso dadaalka (maaha inta badan kiiska GIS) laakiin waaxyo kale.
Andrés isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan qabaa arrinta qiimaha ama collection of software lahaansho waa dood xoogaa aan dabiici ahayn. Habka of software lacag la'aan ah looga golleeyahay in kor loogu qaado horumarinta iyo isticmaalka codsiyada oo lacag la'aan ah (free inta badan), laakiin ma inay ka dhigaan dembi ganacsiga iyo adeegyada (kiiska soo horjeeda waa marka shirkadahan geeyo falalka sharci-darrada ah iyo musuq maasuq inuu kordhayo iibka ama Lagaga suuqa , oo ku xadgudbay sharciyada antitrust ee dalalka).
Waxaan u maleynayaa inaadan waligood su'aal gelin baahida loo qabo in lagu bixiyo software gaar ah. Maxay ayaa la sheegay waa la'aanta ah ee lagu beddeli karo si ay u ilaaliyaan xoriyadda (mid ka mid ah qiyamka asaasiga ah ee lagu daydo dhaqaale ee hadda) si ay u doortaan, isticmaalka iyo soo saaro (akhri liisanka aan ku darsatey ma xaddido xuquuqdayda in wax soo saarka ee aan shaqada, ama xorriyadayda si aan u doorto qalab tiknoolajiyad ah).
Jawaabta dhibaato taasu waa qumman tahay in la abuuro iyo bandhigo suuqa waxyaabaha cusub ee hadda jira kale, dhammaystira sahayda suuqa la nooc cusub oo laysanka iyo qaababka cusub iyo binta ah, saarayo galitaanka xorriyadda doorashada macaamiisha iyo dadka isticmaala.
Haddii arrinta ayaa jira alaabta ganacsiga, shirkadaha iyo miraheeda xad-dhaaf ah, kaas oo u dhigma lahaa kaalmada gobolka ee iibka ah ee software lahaansho ama qaramayn ee shirkadaha iyo shirkadaha soo saara software ka tari. Fikrado aan caadi ahayn, dabcan, in FSF ama ururo kale aysan waligood soo jeedin. Taas beddelkeeda, ujeedadu waxay ahayd had iyo jeer abuurista alaabo cusub iyo adeegyo cusub.